Umphathiswa nohlelo lokuhlola ukusebenza ezikoleni zeLembe | News24
Umphathiswa nohlelo lokuhlola ukusebenza ezikoleni zeLembe
PHOTO: suppliedIzikhulu zoMaspala beLembe ziholwa uMeya uSduduzo Gumede kanye namalunga esishayamthemtho ngenkathi uMphathiswa wwezemfundo enikezela ngezinsiza ezikoleni zakwaMaphumulo ngeledlule.
Umphathiswa wezeMfundo KwaZulu Natal uMthandeni Dlungwana kanye namalunga esishayamthetho sesifundazwe namakhansela oMasipala besifunda seLembe bavakashele izikole zalesisfunda njengenxenye yohlelo lomnyango lwaminyaka yonke yokuhlola izikole emva kwemiphumela kamatikuletsheni ngolwesithathu zi-17 kuMasingana.
Loluhambo luqale ezikoleni zakwaMaphumulo iNkonjane Secondary kanye neMbekaphansi High school ngenhloso yokuhlonza izingqinamba eziholele ekutholeni imiphumela engemihle kwezinye zalezi zikole nyakenye.
Lezizikole zombili zingezinye ezithole ngaphansi kuka-40% kwimphumela kamatikuletsheni wangowezi-2017.
Loluhlelo luyingxenye lokuhlola kwezikole ngumnyango nohlose uku nokubhekana ngqo nezinqinamba nokuqhamuka nezisombululo ekufukulni imiphumela kusukela nonyaka kuya phambili.
Usokhaya wakwaMaphumulo uZibuyisile Khuzwayo-Dlamini unxenxe abaholi bomphakathi kanye nabangamele izikole ukuba basebenze ndawonye noMnyango Wezemfundo nomasipala ukulwa nezinto eziphazamisa inhlalakahle yasemphakathini.
“Izingane zethu kumele kube ngumsebenzi wethu ukuzinakekela njengabazali, ingazne kumele ifundiswe ekhaya isimilo nenhlonipho.
Othisha bona bakhonela ukusiza ingane isimame ngkwemfundo, manje ke asibambisane ukufukula izingane zethu,” kubeka uKhuzwayo Dlamini.
Ezinye zezinqinamba ezibekwe othishanhloko bezikole zendawo kubalwa ukukhulelwa kwabafundi, ukushoda kothisha, ubunzima bokuwela umfula uThukela meline kakhulu kanye nokwanda kwabafundi abashiya isikole.
uMphathiswa uDlungwane naye ube esenxusa iziphathimandla ukuba zibambe iqhaza ekusebenzeni kwezikole kwansuku zonke waphinde wathi imfundo yebantwana kumele ize kuqala.
“ Izikole lezi ezithole ngaphansi kuka-40% komele ziqhamuke necebo elizonqanda ukuphinda imiphumela yanyankenye. Imiphakathi nezinye izinhlaka kumele zibonakale ekusebenzeni kwezikole kwansuku zonke ukuze sakhe imiphakathi encono neNingizimu Afrika eqhakazile,” usho kanje.
Umphathiswa njengokujutshwa kwakhe esifundeni seLembe uvale uhambo lwakhe ngokuvakashela iSizani Primary School e Salt Rock kanye ne Bhidakhona Primary eNdwedwe.
Kube sekuba khona umhlangano wokubhunga nobuse Stanger High School.